I-TIGERNU, uyilo olutsha, uziphu ogqibeleleyo
ngomphathi ku 20-06-22
Umnini we-TIGERNU, MR. Qian, uhlala egxila kuphuculo lwe-zipper, kuba uziphu wengxowa yeyona nto ibaluleke kakhulu kwingxowa enye. Singumvelisi wokuqala okhankanye umxholo wobusela eTshayina, oobhaka beelaptop, ngaphandle kokhuseleko oluqhelekileyo kwindibaniselwano ...
I-TIGERNU inikele ngoobhaka kwisibhedlele sasekuhlaleni ngoSuku lwaBongikazi lwaMazwe ngaMazwe, nge-12th kaMeyi, sibabulela ngokungazenzisiyo bonke oogqirha nabongikazi abazama ukugqiba imisebenzi ye-COVID-19 eWuhan .indawo enezona meko zingqongqo. Xa sithetha ngemishini yelinye ishishini, impendulo ...
Kwenzeka ntoni ngeli xesha likhethekileyo?
ngomphathi ku 20-03-30
I-TIGERNU luphawu oludumileyo lwengxowa e-China, kwaye ngumenzi wokuqala e-China ukubeka phambili umxholo wengxowa yokulwa nobusela. Ukusukela oko kwaqhambuka i-coronavirus, sithathe amanyathelo asebenzayo okuqinisekisa unikezelo olungxamisekileyo lwentengiso yethu ephambili .Ngoku, amandla emveliso abe ...
I-TIGERNU iqale umsebenzi ngokulandelelana kutshanje, kwaye yaphumeza ngokungqongqo iimfuno zamasebe oMyalelo wokuThintela iNtsholongwane eGuangzhou, kwaye yaqhuba ubhaqo lobushushu, ucoceko kunye nokubulala iintsholongwane, kunye nokubuyisa ubhaliso lwabasebenzi baphinde basebenza. Incwadana yokuthintela iCoronavirus i ...
I-TIGERNU inoxanduva lwabasebenzi kunye nabathengi, ngokuguqukayo ijongana neengxaki zomsebenzi ngexesha lokulwa kwentsholongwane yaseCorona .Basebenzi bobabini basebenzela ekhaya.
I-TIGERNU inoxanduva lwabasebenzi kunye nabathengi, ngokuguqukayo ijongana neengxaki zomsebenzi ngexesha lokulwa kwentsholongwane yaseCorona .Basebenzi bobabini basebenzela ekhaya. Ukuze usombulule ingxaki yomsebenzi ngaphambi kokuba siqale ukusebenza eofisini, i-TIGERNU ithathe isigqibo sokwazisa ngesikhokelo samva nje se-Virus kurhulumente wengingqi, kuba ...